Inona avy ny SEO soso-kevitra azonao omena ahy?
Amin'ny Semalt , heverinay fa ny SEO ihany no miasa raha mampiasa fomba fijery feno. Ny fanamafisana fotsiny ny lohateninao sy ny famaritana meta dia tsy ampy. SEO koa dia momba ny haingon'ny tranonkala, ny traikefa amin'ny mpampiasa, ary ny votoaty lehibe. Androany aho dia hizara ireo toro-hevitra SEO izay hampiakatra ny tranokalanao. Tohizo ny famakiana hamantarana azy rehetra.
Fitsipika SEO miavaka mba hanatsarana ny laharan'ny tranonkalanao:
Mamorona votoaty mampidi-doza
Ny antony Ny mpampiasa mijanona amin'ny tranokala vitsivitsy dia hoe liana izy ireo. Ahoana no ahafahanao mientanentana sy mandray anjara amin'izany? Tsotra ny valiny: amin'ny famokarana votoaty mahasoa sy mahaliana izay mampisy vidiny. Rehefa mamorona votoatin-tranonkalan'ny tranokalanao dia araho amin'ny soso-kevitra manaraka:
Mampiasà fiteny mazava sy tsotra rehefa miresaka lohahevitra lalina;
Miresaha amin'ilay mpamaky. Ampiasao ireo mpisolo anarana mba hiresaka mivantana amin'ny mpamaky anao;
Mampiasà hatsikana. Tadidio fa mpamaky mamy no olona mijery sy maniry hamaky teny;
Ampiasao ny sary tsara indrindra sy ny lahatsary ao amin'ny tranonkalanao. Izy ireo no mahatonga ny tranokalanao ho tsy hay hadinoina ary hanampy amin'ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny mpamaky.
Voaporofo fa ny votoatin'ny tenanao manokana dia manatsara ny fahombiazan'ny tranonkalanao sy ny fandraisanao ireo mpitsidika anao.
Ataovy mahomby ny tranokala fahombiazanao
Miezaha hitazona ireo mpitsidika amin'ny tranokalanao mandritra ny fotoana maharitra. Avelao izy ireo fa misy zavatra hafa horesahina. Ilaina izany mba hisakanana an'io tsindry io amin'ny pejy valin'ny fikarohana izay antsoina koa hoe rebounce. Araka ny fantatrao dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny SEO ny taham-pitenenana avo lenta. Manondro ny fitadiavana milina fa tsy mamaly ny fikarohana nataon'ireo mpitsidika ny tranonkalanao.
Ny rafitra fanorenana izay hita taratra mazava ao amin'ny pejinao dia ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fialana. Mifantoha amin'ny fanatsarana ny tranokalan'ny tranokala ho an'ny mpampiasa sy ny fitaovam-pitadiavana. Ataovy koa ny fikarohana teny fototra. Tadidio fa ny fametrahana ny tranokala havanana dia ny hahatonga azy io ho mazava araka izay azo atao. Ataovy azo antoka fa manintona ny menioo. Amin'ny fananganana sehatra an-tranokalan-tserasera, miantoka fa afaka mikaroka tsara ireo pejy ny mpikaroka ary afaka mahita mora izay tadiaviny.
Asa eo amin'ny tranonkalanao haingana
Website famerimberenana hafa dia zavatra hafa izay manimba ny SEO anao. Tsy tian'ireo mpampiasa ny miandry ny votoatinao hitondrana. Noho izany, rehefa manatsara ny tranokalanao dia ataovy azo antoka fa entin'ny pejy ao anatin'ny 2 segondra na latsaky ny pejy. Tsidiho ny serivisy PageSpeed ​​Insights ao Google mba hahitanao ny torohevitrao tokony hataonao. Jereo koa ny haben'ny pejy misy anao. Andramo ny fandroahana araka izay tratranao amin'ny fampiendrehana ny fango sy ny sary.
Izay mandeha amin'ny haingam-pandeha, dia mandeha ho an'ny tranonkalanao finday manontolo - tokony ho haingana izany, fa tokony hatao tsara koa izy io ary manana fiaramanidina tsara, mba hahafahan'ny mpampiasa sy Google mahita izay hitany noho ny fo.
Araka ny azonao takarina, ny ankamaroan'ny fanatsarana rehetra ataonao ho an'ny mpampiasa anao dia manana fiantraikany tsara amin'ny SEO anao. Manantena ianao fa tianao ny tolo-kevitra voatanisa etsy ambony. Apetraho ireo torohevitra SEO ireo ary jereo izay mitranga amin'ny toerana misy anao Source .